प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुन एजेण्डाले प्राथमिकता पाउला ? - Khula Patra
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुन एजेण्डाले प्राथमिकता पाउला ?
प्रकाशित समय: २१:०२:०९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही चैत २३ गतेबाट भारतको ३ दिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
उत्तर चीनबाट पहिलो भ्रमण हुने भन्ने धेरैको अनुमान र आशंका विपरीत अन्तत : ओलीको पहिलो औपचारीक विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको मान्यता नै रहँदै आएको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने यसलाई ब्रेक गर्दै उत्तर चीनबाट भ्रमणको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही २३ गतेदेखि हुन लागेको ३ दिने राजकीय भ्रमण कस्तो रहला भन्ने जिज्ञासा जनमानसमा देखिएको छ ।
कस्तो हुन्छ ओलीको भारत भ्रमण ?
भ्रमणका बारेमा संसद बैठकलाई जानकारी दिँदै प्रम ओलीले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर, बराबरी, सन्तुलित, अहस्तक्षेपकारी, पञ्चशिलको आधारमा, न्यायोचित हुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले पारस्परिक लाभ, समझदारी, विश्वासयुक्त वातावरण सिर्जना गरी “देशलाई अफ्ट्यारो पर्ने, शिर निहुरिने कुनै पनि सन्धि सम्झौता हुनेछैन, गर्नेछैन ।” भन्नुभयो ।
असमानता अनुभूत हुने, अपमानबोध हुने कुनै पनि कुरा भ्रमणमा नहुने भन्दै प्रम ओलीले भन्नुभयो, ‘छिमेकीहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ, पारस्परिक सहयोगपूर्ण हुन्छ, विदेश नीतिको प्रस्थान बिन्दु एक शब्दमा भन्नुपर्दा मित्रतापूर्ण हुन्छ ।’
भारत भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, कर्तव्य, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, विकसित मूल्य मान्यताका आधारमा मात्रै सम्बन्ध सुदृढ हुने भएकाले त्यसै अनुरुप छलफल र भेटघाट हुने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
भारत भ्रमणमा जान पाउँदा आफू निकै खुशी रहेको भन्दै प्रम ओलीले भ्रमणलाई शंकारहित, अविश्वासरहित र भरपर्दो बनाइने बताउनुभयो ।
प्रम ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी सबैलाई थाहा छ । नेपाल र भारतकाबीचमा सदियौँ अझ त्यो भन्दा धेरै पुरानो र बहुआयामिक तथा मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध छ । कोही कसैले सम्बन्ध बिगार्न खोजे पनि बिगार्न सक्ने अवस्थामा छैन । फेरि सप्रिने ठाउँमा आईपुग्छ ।’
सन्धि सम्झौतामा पुनर्विचार
१९५० मा भएको सन्धिमा असमानता लाग्ने, बिझाउने खालका मुद्धालाई पुनर्विचार गर्न दुवै पक्ष तयार भएर नै प्रवुद्ध समूह बनाएर दुवै देशले हल खोजिरहेको अवस्थामा यसबारेमा समेत आफूले भेटघाट र छलफलमा कुरा उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘मेरो भारत भ्रमण विशुद्ध रुपमा देश र नागरिकको अधिकतम हितमा नै केन्द्रित हुन्छ ।’
के–के हुन्छन् सम्झौता ?
भ्रमणमा जाँदैमा सन्धि सम्झौता हुनै पर्छ भन्ने छैन, दुवै देशको सम्बन्ध अझ कसरी मजवुद बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै मेरो प्रयास रहनेछ, प्रम ओलीले भन्नुभयो ।
भ्रमणमा जाँदा यस्तो सम्झौता गर्यो, उस्तो गर्यो भनेर सम्झौताको गणना गर्ने, सम्झौताको चाङ लगाउनेभन्दा पनि पुराना र भइरहेको सम्बन्धहरु कसरी कार्यान्वयन र भरपर्दो बनाउने भन्नेमै मेरो ध्यान जाने छ ।
यस अघि भएको भारत भ्रमणमा पनि आफूले सम्झौतामा जोड नदिएको र त्यो बेला अत्यन्तै महत्वपूर्ण र देशको हितमा सम्झौता भएको पनि ओलीले स्मरण गराउनुभयो ।
तर, पनि भ्रमणका बेला केही सम्झौताहरु भने हुने प्रष्ट पार्दै ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग, पारस्परिक सहयोगको आदान–प्रदानलगायतका बारेमा सम्झौता गरिने बताउनुभयो ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यसलाई अग्र्यानिक रुपमा कसरी विकशित गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान हुनेछ ।’
हामी गंगाको मार्गबाट सामान ल्याउन सक्छौँ । यस विषयमा छलफल चलिरहेको यसलाई मूर्त रुप दिन भ्रमणमा थप छलफल हुनेछ । यस्तै, रेलमार्ग, उर्जा उत्पादन र दुई देशबीचको व्यापार सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यापार घाटालगायतका विषय मुख्य रुपमा छलफलमा उठ्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
पुराना सम्झौताहरु पन्चेश्वरलगायतका सन्दर्भ, एकिकृत चेकपोष्ट, हुलाकी राजमार्ग, सिमापार रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालनलगायतका विषय भ्रमणका मुख्य एजेण्डा रहेको ओलीले बताउनुभयो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोगको प्रशंसा गर्दै ओलीले अहिले पनि भारतले प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाहरुको अगाडि बढ्न नसकेका कामलाई तिब्रता दिन ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
विभिन्न परियोजनामा भारतबाट सहुलियत ऋण लिने, नेपाल प्रवेश गर्न थप हवाई बिन्दुको माग गर्ने, बाढी र डुबान, पारवाहन, दार्चुलालगायतका कतिपय ठाउँमा पुर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिने विषयहरु प्राथमिकतामा रहने छन् ।
सार्कलार्इ पुनर्जीवन दिन मोदीसँग गम्भीर छलफल
नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेक दुवैको अध्यक्ष राष्ट्र हो । सार्कको बैठक दुई वर्ष अघि नै बस्नुपर्नेमा भारत र अन्य केही मुलुकको असहयोगले अझैसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।
त्यसलाई पुनर्जीवन दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गम्भीर भएर छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशमा सार्कले खेलेको भूमिका सह्रानीय रहेकाले यसको भविष्य खतरामा पर्न नदिन अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले आफू गम्भीर रहेको भन्दै ओलीले यस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल केन्द्रीत हुने बताउनुभयो ।
कालो धन शुद्धीकरण भन्दै भारतले नोटबन्दी लगाउँदा नेपालीले एक हजार र ५ सयका नोट साट्न नपाएर व्यहोरेको क्षतिका विषयमा पनि कुरा उठाइने छ ।
संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘भारतसँग कुरा गर्दा हामीले भारतका पनि जायज चासो, चिन्ता र सरोकारलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
आतंकबाद, मानव तस्करी, क्रसबोर्डर अपराधका कुरा दुवै देशका साझा चासो र मुद्धा हुन् । यसमा गर्नुपर्ने आवश्यक सहकार्य र सम्झौता हुन्छन् ।’